PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Akumele baklonyeliswe ngobala lwamagoli abagadli bePSL
Akumele baklonyeliswe ngobala lwamagoli abagadli bePSL
Isolezwe - 2018-05-18 - EZEMIDLALO -
UYAZI kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi uvele ulibeke ngambaba uthi: Angifuni. Lokhu kwenza kucace kuhle kwempahla yembuzi ukuthi akumele uncengwe ngoba ngeke ushintshe kulokhu osuke usukunqumile.
Ngiyazi abantu abaningi leli gama elithi angifuni baleyamanisa nokwedelela kodwa ngilibona lingcono kakhulu kunokuthi ulokhu ugwegwesa ube wazi ukuthi ngeke uyenze into ethile. Enye yezinto engizenzayo ukuthi angilokhu ngimbangcaza uma kade ngikukhuza ngento ethile yase igcina ikufaka enkingeni. Ngiyasho nje ngingananazi ukuthi ngakutshela ngakho, ayikho enye into engingakusiza ngayo ngoba awufunanga ukulalela.
Namuhla ngike nganinga ukuloba ngendaba kaTendai Ndoro we-Ajax Cape Town nemidlalo yokuhlunga eqhubekayo kodwa ngabuye ngasheshe ngazizwa ukuthi angifuni. Into eyenza ukuthi ngingafuni ukuthi ngike ngabhala ngalo lolu daba emasontweni adlule kusona lesi sikhala, ngibeka ukuthi kungase kube nesiphithiphithi sekuphuma isinqumo, imidlalo ye-Absa Premiership isiphelile. Njengamanje engingakusho ngalolu daba kunye kuphela, ukuthi ngasho futhi sekwenzeka yona le nto engangixwayisa ngayo. Ngithi yeshula futhi anginandaba noma kungaphithizela kuze kuqale isizini ezayo akudikizi ndawo ngoba abanye abantu abafuni ukuyifunda isekude. Ngincamela ukukhuluma ngenye into namuhla, angifuni ukukhuluma ngoNdoro.
Uyazi ngike ngahlala ngacabanga ngibuka isimo sethu kwi-Absa Premiership sokuba nabagadli ababuthuntu, ngezwa inhliziyo yami ishona phansi lapho engingazi ukuthi iyotakulwa khona ngubani, wakwabani, eqhamuka kuphi. Nalo lolu daba angiqali ukuluthinta kule ngosi kodwa njalo uma ngicabanga ngalo ngivele ngizibuze ukuthi kazi libheke kuphi ibhola laseNingizimu Afrika.
NgoJuni 14 kuzoqala iNdebe yoMhlaba eseRussia lapho thina balandeli bebhola baseNingizimu Afrika sizobe sihleli nabo khona lapha abadlali bethu siwabuka kwithelevishini amanye amazwe, ngoba bahluleka bancama ukuzibekisela indawo kule midlalo. Ukuze uye eNdebeni yoMhlaba kumele kube khona amaqembu owehlulayo ezwenikazi lakho. Ukwehlula lawo maqembu kudinga ukuthi ubeke ibhola enethini ngoba ayikho enye indlela yokuwina imidlalo.
Le yokukhahlela ibhola lidlule unozinti bese liqabula inethi yinto esehlula ngamalengiso. Njengoba kuphela isizini nje abadlali bePremiership okuyibona abahambe phambili ngokushaya amagoli, uPercy Tau weMamelodi Sundowns, noRodney Ramagalela wePolokwane City. Okushayisa namahloni kunakho konke nje wukuthi bashaye amagoli awu-11 emunye isizini yonke emidlalweni ewu-30 yeligi. Hlazo lini nje leli kodwa eNingizimu Afrika sakhile?
Emasontweni edlule ngike ngabuza kokhulumela iPremier Soccer League (PSL) ngaphambi kokuthi kudlale imidlalo yokugcina yeligi, ukuthi kuzokwenzekani uma uTau noRamagalela begcina bebambene ngalo lolu bala lwamagoli awu-11, ngangayithola impendulo. Ngiyazi ukuthi umgadli oqeda isizini enamagoli amaningi uklonyeliswa ngoR50 000 uma sekunomcimbi wePSL lapho kusuke kuchonywa uphaphe abadlali abasuke benze kahle. Nokho kulokhu ukube yimina othatha izinqumo mayelana nalo mklomelo womgadli, bengizovele ngingawuniki muntu. Empeleni akekho umgadli okumele anikwe umklomelo ngokuthi ushaye amagoli angafinyeleli ku-15 isizini yonke. Usuke umklomelisa ukuthi wenzeni ngempela lowo mgadli? Ngabe usuke umgqugquzela ukuthi aqhubeke nokugeja bese ashaye amagoli ambalwa?
Ngazi kahle ukuthi akubona ubulungiswa ukuqhathanisa abadlali bethu nabadlala kwiEnglish Premier League ngoba izinga lethu alifani nakancane. Kodwa ngifisa kube khona abakufundayo abagadli bethu kubadlali abafana noMoh Salah weLiverpool, obengalibheki ipali kule sizini esanda kusongwa.
Lo mgadli ushaye amagoli awu-32 emidlalweni ewu-38 wephula irekhodi likaCristiano Ronaldo, Alan Shearer noLouis Suarez abake bashaya awu-31 emidlalweni ewu-38. Abake bafunde abagadli bethu kulaba baphesheya baphinde bakulangazelele ukushaya amagoli ukuze nabalandeli bezokujabulela ukuya ezinkundleni.
Ngisijabulele kakhulu isinqumo sikaKaizer Motaung ongusihlalo weKaizer Chiefs oveze ukuthi ngeke ube khona umcimbi wokuklomelisa abadlali beqembu kulokhu ngoba akukho ndebe abayitholile kula masizini amathathu adlule.
Yini ngempela abebezobongwa ngayo abadlali beChiefs ngemuva kokushaya udaka olungaka amasizini amathathu wonke?
Uma ungazimisele ngokwenza into kumele uvele ucacise nje ukuthi awufuni njengoba enzile uMotaung.
Mhlawumbe kuzobahluza imiqondo abadlali beChiefs ukuthi usihlalo wabo uvele wangawenza umcimbi waminyaka yonke ngoba engafuni ukuncoma into engekho. Kubalulekile ukuvele uthi angifuni kunokulokhu ubhala ucisha.